Machadka McKnight Foundation, oo ah xarun caalami ah oo aqoonsan aasaaska shakhsiyeed oo ku salaysan Minnesota, ayaa waxay u aragtaa adduunka oo aqoonsanaya sharafta qof kasta, halkaas oo abuurista farshaxanka iyo sayniska si wadajir ah isugu yimaadaan si loo ilaaliyo midkeenna iyo dhulka keliya. Hay'addu waxay aaminsan tahay in ay qaadato xaqiiqo dhab ah oo aad uwanaagsan oo muuqaal ah oo wax ku ool ah oo wax looga qabanayo cadaadiska kuwaas oo si joogta ah u dhaqma nidaamyadeena siyasadeed, siyaasadeed iyo dabiiciga ah, iyada oo lagu xoojinayo dadka iyo beelaha si ay u sameeyaan isbedel wanaagsan. McKnight's cusbooneysiiyay cusub Qaab-dhismeedka Istaraatiijiga ah ujeedooyinkooda, qiimaha, iyo habka loo haqabtiro deeq-bixiyeyaasha, xitaa marka firfircoonida dunidu u baahan tahay is-qabad joogto ah iyo isdhexgalka istaraatiijiga ah.
Ka warbixinta Madaxweynaha, Gudoomiye ku-xigeenka Maaliyadda iyo Hawlaha (VPFO) ayaa ku biiri doona koox hogaamineed oo heer sare ah oo khibrad u leh taariikhda aasaasiga ah ee aasaasiga ah si ay uga caawiso gaaritaanka himilooyinkeeda istaraatiijiga ah. VPFO waxa uu dhisi doonaa loona maamuli doonaa nidaamyo xooggan, nidaam isku dhafan iyo ficil ka kooban maaliyadda, hawlgallada iyo u hoggaansanaanta ku habboon taageerada howlgalka McKnight. Qofkani wuxuu noqon doonaa fekerka istaraatiijiga ah iyo hirgeliyaha la xaqiijiyey ee keenaya waxqabadyo urur, farsamo, iyo adeeg. VPFO waxay hogaamineysaa oo ay si dhow ula shaqeyn doontaa koox ka mid ah agaasimayaasha xayeysiinta ah ee mas'uulka ka ah maaliyadda, deeqaha iyo maamulka macluumaadka, soo dhaweynta iyo qalabka, tignoolajiyada macluumaadka, iyo hibada iyo dhaqanka si ay ula socdaan nidaamyada gudaha ee McKnight ee saameynta, baaxada, iyo maamulida codka. Waayo-aragnimada hoggaaminta iyo sir-doonnimada ee iskaashiga lala galo daneeyayaasha gudaha iyo dibadda waxay muhiim u yihiin kartida dhiiri-galinta iyo maamulida kooxaha sarreeya. Iyadoo la socota Kooxda Hoggaanka Sare ee McKnight, VPFO waxay ka caawineysaa inay sii wado ballan qaadka Hay'adda Kala duwanaanta, Sinnaanta, iyo Ka Qaybqaadashada iyo kobcinta dhaqanka xiisaha, hal-abuurnimada, heer-sareeya, iyo ujeedada ay dhammaan shaqaaluhu koraan oo ay ku raaxaystaan. Ujeedka shaqada iyo qiimaha McKnight, VPFO wuxuu u adeegi doonaa hoggaamiye farsamo oo firfircoon iyo safiir u ah hay'adda, gudaha iyo dibedda.
Baadhitaankan waxaa sameeya NPAG. Tilmaamaha codsiga waxaa laga heli karaa xagga hoose ee boggan.
Fursadaha Hoggaaminta ee VPFO
VPFO wuxuu la shaqeyn doonaa Madaxa iyo Kooxda Hoggaanka Sare si loo kormeero loona maamulo McKnight dhaqaalaheeda, hawlgalkiisa, iyo u hoggaansamida nidaamkana waafaqsan waajibaadka iyo qiimaha. Qofkani wuxuu kaalin muhiim ah ka qaadanayaa kobcinta iyo ilaalinta dhaqanka kalsooni sare, waxqabadka, iyo xisaabtanka la jaanqaadaya balanqaadkayaga Kala duwanaanshaha, Sinnaanta, iyo Ka mid noqoshada. Taageero ay ka heleen Maamulaha Maaliyadda, Deeqaha iyo Maareynta Macluumaadka, Teknoloojiyada Warfaafinta, Soo-dhoweynta iyo Xarumaha, iyo Takhasuska iyo Dhaqanka, VPFO waxay filan kartaa inay la xiriiraan fursadaha soo socda ee hoggaaminta:
Hirgelinta Jihooyinka Istaraatiijiyadeed ee cusub iyo Muhiimadaha
U keenso faham macquul ah oo leh muraayadaha hogaanka guud ee ururka si loo turjumo tilmaamaha istaraatiijiga ah iyo mudnaanta ee kartida urureed;
Qiimee khatarta ka jirta ganacsiga iyo dejinta xuduudaha khatarta khatarta; aqoonsashada dhaqaalaha, hawlgalka, iyo isfahamka fulinta iyo buuxinta khariidadaha ku lug leh hababka ugu wanaagsan ee fasalada, oo ay weheliso xigmadda gudaha, si ay u taageerto guusha hawsha;
Samee oo si joogta ah ula xiriirto mudnaanta ururada iyada oo qayb ka ah Kooxda Hoggaanka Sare ee McKnight iyo hubinta isku dhafka iyo is-dhexgalka iskudhaca fikradaha, xalinta dhibaatada, iyo dilitaanka shaqada;
In la siiyo fikrado iyo hoggaan u noqoshada horumarinta joogtada ah ee nidaamyada ururrada, qaababka, siyaasadaha, iyo awooda si ay ugu suurtageliyaan heerka ugu sarreeya ee tayada barnaamijka iyo waxtarka;
Isdhexgalka iyo Xoojinta Mas'uuliyadda Dhaqaalaha, Hawlaha iyo Fulinta
Hubi in nidaamyada waxtarka leh, waxqabadyada, iyo hab-dhaqameedkuba ay jiraan si loo gaaro hadafyada iyo ujeedooyinka hawlgalka Aasaaska; horumarinta qorshooyinka tayo sare leh, dayactir qiimo leh, horumarinta iyo hirgelinta adeegyada, nidaamyada iyo qalabyada lagu taageerayo samaynta deeq-lacageed wax ku ool ah, u hoggaansamida sharciga iyo siyaasadda, iyo guud ahaan wax-qabadka ururka;
Tilmaansiinta, iyadoo lala kaashanayo Agaasimaha Maaliyadda, dhammaan dhinacyada kormeerka dhaqaalaha oo ay ka mid yihiin qorsheynta iyo miisaaniyadda, xisaabinta, xisaabinta, diiwaangelinta shirkadda, iyo u hoggaansamida. Bixinta nidaamyada maaliyadeed iyo qalabyada soo saarista saadaasha waqtiga dhabta ah, taageeraya go'aamada ganacsiga ee sanqadha, bixinta kaalmooyinka danaha, iyo dhisida awoodda dib-u-eegista barnaamijyada miisaaniyadda;
In la ilaaliyo khibradda mawduuca, la talin, iyo hubinta u hoggaansamida saldhigga oo dhan si waafaqsan arrimo badan oo shirkad, shaqaale, shuruuc ku salaysan iyo u hoggaansamida; kor u qaadista tababarka, hababka, habraacyada, iyo koontaroolka si loo yareeyo khatarta u hoggaansanaanta hadba
Inuu kormeero isdhexgalka iyo hawlgalinta Maaliyadda, Soo-dhoweynta iyo Xarumaha, Deeqaha iyo Maareynta Macluumaadka, Teknoolajiyada Warfaafinta, Takhasuska iyo Dhaqanka, iyo Kala-duwanaanta, Sinnaanta iyo Ka-qaybgalka;
Bixinta kormeerka qandaraaska guud iyo isku-duwidda lataliye dhinaca sharciga ah iyo taageero sida looga baahan yahay wax ka qabashada baahiyaha ururka;
Ka qaybgal dhammaan kulamada guddiga waxayna u adeegaan sida loola xiriiro Guddiga Maaliyadda iyo Xisaabaadka ee Guddiga.
Maareynta Dhaqanka iyo Maareynta Isbedelka Ururka
Habka loo marayo hoggaaminta iyo taageerida dhaqanka oo dhamaan xubnaha kooxuhu dareemayaan qiimeeyn iyo loo aqoonsado inay muhiim u yihiin hormarinta hadafka iyo hadafyada aasaasiga ah, waxaana lagu dhiirigelinayaa in ay sii kordhiyaan xirfad ahaan;
Isaga oo kaashanaya Madaxweynaha iyo Kooxda Hoggaanka Sare, waxay qaadaan door hoggaan oo aad u muuqda si ay u bixiyaan hab wadajir ah oo lagu ilaalinayo dhaqanka wada shaqeynta iyo hufnaanta McKnight;
Samee ujeedooyin gaagaaban iyo mudo gaaban ah, horumarinta xeelado iyo qorshayaal, iyo fududeynta waxqabadyada maaraynta isbedelka si loo hubiyo in isku xirnaanta urureed ay la socoto qaabka istaraatiijiga ah ee McKnight;
Horumarinta shakhsiyaadka iyo kooxaha, maareeyaan qoondaynta shaqada, waxay bixiyaan jawaab celin wax ku ool ah iyo horumarin xirfadeed, iyo taageeraan jawi kooxeed wanaagsan;
Muuji xirfadaha, dareenka, iyo kalsoonida shakhsiyadeed ee ku xirta awoodda xubin kasta oo kooxda ka mid ah oo keenaya howlgalka.
Shahaadooyinka Meel-Gaarka ah
Musharaxa ugu fiican ayaa si qoto dheer uga go'an howlaha McKnight iyo inuu fahmo doorka muhimka ah ee deeq-bixiyeyaashu ka ciyaaraan horumarinta isbeddelka bulshada. Inkasta oo qofna uusan ku qeexaynin dhammaan sifooyinka hoosta ku xusan, murashaxa ugu fiican wuxuu yeelan doonaa qaar badan oo ka mid ah xirfadahan soo socda iyo shakhsi ahaaneed, sifooyinka, iyo khibradaha:
Ugu yaraan 10 sanno oo ah hoggaan istiraatijiyadeed iyo kobcinta xirfadda ee dhaqaalaha, hawlaha fulinta iyo fulinta ee hay'ad isku mid ah;
Diiwaanka taxanaha ah ee bixinta adeegyada tayada, hagaajinta urureed, iyo heer sare ee istiraatiijiyadeed, abaabulo, iyo miisaaniyadda oo ay weheliso xafiis heer sare ah oo dhaqaale, jireed iyo ilo aadane ah;
Muujinta shaqooyinka oo muujinaysa ballanqaadyo ku aaddan abaabulka wanaagsan ee waxtarka iyo hufnaanta, adeegaha hoggaanka, maareynta wada shaqaynta iyo shaqada kooxeed ee waxtarka leh, iyo kobcinta sinaanta, kala duwanaanta iyo ka mid noqoshada;
Fiiri aragti istiraatiijiyadeed iyo hawlgal iyo xirfad gaar ah oo loo soo bandhigo macluumaadka iyo tarjumida aragtida tallaabooyinka waxqabad ee muddada dheer iyo gaaban;
Muujinta khayraadka ee dejinta mudnaanta, dejinta maaraynta isbeddelka, iyo soo jeedinta siyaabo cusub oo lagu gaari karo natiijooyinka la doonayo ee leh habab loo dhan yahay qorshaynta, xalinta dhibaatooyinka, iyo go'aan qaadashada;
Khibrad wadaag ah, heerarka bisil, iyo dabacsanaanta si ay ula macaamilaan dad badan oo daneeyayaal ah, oo ay ka mid yihiin Guddiga Maamulayaasha, madaxda waaxda sare, iyo shaqaale ka tirsan ururka;
Xirfadaha isgaadhsiinta ee afka iyo qoraalka ah oo ay ku jiraan awooda muuqda ee cilmi-baarista, soo-dejinta, iyo falanqaynta macluumaadka, dukumiintiyada, iyo soo-bandhigista xogta si cad oo qeexan shaqaalaha shaqaalaha, oo ay ku jiraan maaraynta sare, shaqaalaha barnaamijka, iyo Guddiga Maamulka;
Hagaajinta aadka u horumarsan, tababarka, iyo xirfadaha ka qaybgalka; raaxo leh maareynta jimicsiga kooxo kala duwan oo horseed u ah natiijooyinka la jecel yahay;
Sirdoonka shucuurta oo aad u horumarsan oo muujiyey karti u lahaanshaha isticmaalka xirfadaha dadka iyo siyaasadda siyaasadeed ee hababka ixtiraamka, iskaashiga, iyo habka diblomaasiyadeed;
Xiriir xooggan oo dhexdhexaad ah, oo xirfad leh ku maamulaya saamaynta; muujiyay karti ay u leeyihiin in ay isku xiraan oo ay dhiirrigeliyaan kooxaha daneeya;
Ku-noqoshada qaybta howl-galka iyo doorka deeq-bixiyeyaasha ayaa wax ka qabta qaar ka mid ah dhibaatooyinka ugu murugsan ee bulshada;
Waayo-aragnimada aan faa'iido doonka ahayn, aasaasiga ah, iyo si toos ah ula shaqeynta aasaas khaas ah Guddiga Maamulayaasha oo lagu daray.
Riix halkan si aad u dalbato furitaanka.
Baadhitaankan waxaa lagu qabtaa gargaar ka yimaada Linh Nguyen, Tamar Datan, Nureen Das, iyo Javier Garcia NPAG. Iyadoo loo eegayo xawaaraha raadintaan, murashaxiinta waxaa si aad ah loogu dhiirigelinayaa inay sida ugu dhakhsaha badan u codsadaan. Dhammaan waydiimaha waa in lagu tilmaamaa MF-VPFO@nonprofitprofessionals.com.
Laga soo bilaabo July 2019.
Dhamaan Macluumaadka © 2019 Siyaasadda Khaaska ah & Shuruudaha IsticmaalkaGoobta bogga
English Deutsch Français العربية 简体中文 ພາສາລາວ Tiếng Việt हिन्दी 한국어 ភាសាខ្មែរ Tagalog Español de Perú Español de México كِسوَهِل Hmoob አማርኛ ˜اَف صَومالي